Hlola iGenova, Italy - World Tourism Portal
Hlola iGenova, Italy
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili eziphezulu eGenova, e-Italy
Okufanele ukwenze eGenova, Italy
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeGenova
Bukela ividiyo ekhuluma ngeGenova
Hlola iGenova (noma iGenoa), idolobha eliyitheku elingokomlando enyakatho Italy, inhloko-dolobha yesiFunda saseLiguria. IGenoa namuhla, njengokuheha izivakashi, ivame ukufihlwa ngamadolobha anjenge Rome or Venice, noma inomlando omude njengesikhungo sokuhweba esicebile futhi esinamandla. Kodwa-ke, ngobuningi bawo amagugu afihliwe ngemuva kwemigwaqo ethokomele, ukudla okuhle kakhulu (izinhlanzi kanye nokudla kwasolwandle), imbobo yokuvuselela endala, izinto ezinhle (kufaka phakathi enye yezindawo ezinkulukazi zaseYurophu ezenze indawo yomhloli wamazwe uChristopher Columbus yindawo eheha ukuba kancane kancane ibe ngaphezulu kufakwe emakethe yezokuvakasha. Njengoba kunezindlu ezifulelwe ngotshani ezakhiwe ngotshani obudonsa ngemibala, amasonto kwezobuciko, izindawo ezihle zasolwandle ezihle, kanye nezindawo eziningi zokunethezeka ezinhle, iGenoa kumele ubone uma ufuna ukuzwa i-Italy "quintessential".
Imbobo yedolobha eliphithizelayo, igcwele izikebhe ngama-yachts, izikebhe, ukuhamba ngezikebhe, izikebhe nemikhumbi yezimpahla. IGenoa idolobhana lolwandle ebaluleke kakhulu eMedithera.
Venice, IRoma, ikhayithi, futhi uFlorence angamadolobha aziwa kakhulu futhi ahlonishwayo e-Italy. Lapho uthuthela enyakatho nentshonalanga ye-Italy (Milan, Turin) kodwa kufanelekile impela ukuhlala izinsuku ezimbalwa noma impelasonto eGenoa. Idolobha liyisisekelo esihle sokuhlola i-Italian Riviera nezindawo ezidumile zomhlaba njengePortofino neCinque Terre.
Idolobha lingaziwa kancane ngabasebenza kakhulu kwezivakashi, kepha ubukhazikhazi bawo buvame ukufihlwa ngaphakathi kwemigwaqo emincane yesikhungo somlando, esibizwa nge- “vicoli”.
IGenoa uhlobo lwetheku ledolobho elibolile elibolile, elinokubola kwalo, nokho, yilokho okwenza lihehe futhi lihle. Izigcawu zezigodlo ezinhle zifihlwe emifantwini eluhlaza, kodwa ehehayo, futhi kukhona izinto zokufuna ukwazi noma ngubani cishe kuwo wonke ama-alley. Idolobhana liyiNtaliyane yakho “ejwayelekile” - enelanga impela (phakathi nehlobo), enezindlu ezibukeka njengeMedithera ezifulelwe ngophahla olungamasheya amnyama, zigcwalisiwe ngamakhofi angaphandle nemigoqo, enezindawo eziningi ezinhle kakhulu ezinendawo enhle, ezitolo ezinhle kakhulu, nezindawo zokudlela. Namuhla, futhi, ichweba lakudala selilungisiwe, futhi njengamanje liqukethe ukwakhiwa okuhle kwesimanje kwe-avant-garde, imarina ejabulisayo, nemigoqo nezitolo eziningana zasolwandle.
IGenoa inesimo sezulu saseMedithera esidala ukuthonywa kakhulu ulwandle okuholela ebusika nobusika obufudumele ngaphezu kwamadolobha angaphesheya kwezintaba zaseLingurian kanye nePo Valley.
I-Aeroporto di Genova - UCristoforo Colombo uhlinzeka ngezindiza eziningana zansuku zonke ezivela kwamanye amadolobha amakhulu aseYurophu anjenge Rome, London, Munich, Paris futhi Moscow nase-Istanbul. Ukusuka esikhumulweni sezindiza kulula kakhulu ukuqasha imoto noma ukuthatha i-shuttle enkabeni yedolobha.
Acquario di Genova (Aquarium), (edolobheni elidala, e-Old Port). Amahora we-Aquarium ukusuka ku-8: 30 kuya ku-21: 00 yokungena kokugcina e-19: 00. Okukhulu kunabo bonke eYurophu. Bheka futhi ukuphakama panoramu, Biology. Ungabhuka futhi nohambo oluqondiswa izivakashi ezingashadile, imindeni noma amaqembu amancane onesifo sokukhetha izazi ngosuku, ihora futhi nesihloko sokuvakasha kwakho.
IGalata Museo del Mare (Imyuziyam yolwandle), iCalata De Mari 1. Funda ngezimpilo zabathumbi, abafudukayo kanye nabagibeli.
Imyuziyamu yobuciko besimanje - uWolfson
Imyuziyamu yobuciko besimanje - iVilla Croce
Iminyuziyamu yezobuciko obuhle - iStrada Nuova - iPalazzo Bianco (I-White Palace) nePalazzo Rosso (iRed Palace)
I-Chiossone Museum yobuciko beMpumalanga. Iqoqo elikhulu kunawo wonke lobuciko baseMpumalanga.
UDoria Museum Wezomlando Wezemvelo
Imnyuziyamu yeSt. Augustine. Indawo yesonto ekhombisa imisebenzi ehlukahlukene yobuciko ephakathi.
Imyuziyamu yasendulo yaseLigurian
Imnyuziyamu yaseLuxoro. Iqoqo langasese elihlala imisebenzi ehlukahlukene yobuciko nefenisha.
I-Raccolte Frugone. Iqoqo langaphambili lobuciko likaNervi.
Umnyuziyamu wobuciko besimanje obusetshenzisiwe.
I-Palazzo Reale (Royal Palace). Ungumnikazi wegalari yezithombe zomlando.
Igalari Yesizwe Yezwe eLigurian eSigodlweni saseSpinola
Imyuziyamu yeLigurian Art Academy
Imnyuziyamu eSigodlweni sePrince. Enye iqoqo lobuciko bomlando beGenovese.
I-Ippolito National Ligurian Museum
ISonto LaseSan Lorenzo
I-palazzi dei rolli ekhona kuhlu lomhlaba lamagugu e-UNESCO
USanta Maria di Castello, umgcini we-oda laseDominican, imnyuziyamu kanye nesonto lesonto ehlobo kunika ingcebo eningi futhi ukuyithola kumahhala ngesikhathi sokuvula kwesonto.
IGenoa iyaziwa ukuthi inesikhungo somlando esikhulu kunazo zonke eYurophu. Le yinhliziyo yomuzi wakudala. Yenziwe ngesibalo esimangazayo semigwaqo emincane nezintethe ezibizwa ngeCaruggi. Ukuhamba kuyo kuzokuphonsa emuva ezikhathini zasendulo lapho iGenoa yayiyitheku elibaluleke kakhulu loLwandle iMedithera. Umuzi uvame ukuphepha, kepha kufanele uqashelwe uma kusebusuku nasezindaweni ezithule kakhulu zibheke ePiazza Principe nasechwebeni elidala, ngenxa yokuba khona kobugebengu obuncane.
ILanterna, ((i-15 min ukuhamba ngezinyawo usuka esiteshini esingaphansi komhlaba (Dinegro) nokusuka lapho uyopaka khona i-Ferry Terminal.). Izimpelasonto namaholide 14: 30 - 18: 30. indlu yokukhanyisela yakudala yaseYurophu futhi uphawu oluvelele lweGenovese. I-Lanterna fortification, isibani sendlu ekhanyayo ngokubukwa kwephaneli, i-promenade nepaki zingavakashelwa ngezimpelasonto nangamaholide. hlela
Indlu yendabuko yeCristoforo Colombo. Ku-piazza Dante uzothola lokho okuthiwa yindlu yendabuko kaColumbus;
Ibhande lokuqina elihlaba umxhwele elakhelwe emagqumeni azungeze idolobha, elivela nge-16th Century
Kukhona ujantshi wesitimela obumnandi obumnandi osebenzisa iMonte Righi, lapho umuntu angaba khona nokuhamba okujabulisayo emagqumeni aseduze nasezinqabeni, noma ahambise umbono omangalisayo wedolobha kanye nolwandle iMedithera.
ISpianata Castelletto iyi-belvedere enhle lapho umuntu angaba khona nombono omnandi wedolobha kanye netheku. Kungafinyelelwa ngokunyuswa komphakathi kusuka kuPiazza della Nunziata noma ngezinyawo kusuka kuleso sikwele esifanayo.
IVia Garibaldi (eyaziwa nangokuthi iVia Aurea neStrada Nuova, iGolden Street kanye neNew Street) enezakhiwo ezinhle kakhulu zebaroque. Ezinye izakhiwo ezifanayo nazo zitholakala eVia Balbi.
I-Old Harbour (Porto Antico), eduzane ne-Aquarium, iyindawo yokuzijabulisa enamamnyuziyamu, ama-cinema, amakhofi kanye nendawo enhle eyakhiwe ngasolwandle.
Amasonto amaningi amahle, amanye awo avela esikhathini se-Romanesque (San Giovanni di Pre ', San Donato, Santa Maria del Castello)
UCorso Italia - Ukuphakanyiswa kukaGenoa
IBoccadasse - ikota yabadobi abahle
I-Palazzo Ducale Lapho abakwaDukes baseGenoa babehlala khona.
U-Il Galeone "Neptune" - ukuzijabulisa okuthandekayo komkhumbi wepirate.
Kukhona izinto eziningi okufanele zenziwe eGenoa. Izingane eziningi ezincane zichitha isikhathi sazo zidlala nabangane bazo emachibini asesidlangalaleni futhi zabelana ngo-ayisikhilimu ngesikhathi sasehlobo. Kunemidwebo eminingi edolobheni nasemagatsheni ezitini abantu abaningi abaziqhenyayo. Ukudoba i-catfish nakho kuyinto abantu abaningi abanayo.
IGenoa ilungele ukuyothenga. Unayo indawo yokudlela yokuqamba, izitolo zomnyango, izitolo zokudla, nabathengisi bakudala.
Downtown, kulabo abafuna ukuphequlula ngokunethezeka kwe-boutique, ungathola ukuthenga okuhlobene nemfashini okuhlobene nomgangatho emhlabeni nge-Via XX Settembre, kusukela kuPiazza Ferrari.
Kunezitolo eziningi ezincane, ezihle futhi ezihlobene nezokuvakasha kulesi sikhungo. Lokhu ikakhulukazi kusezigcawini eziphakathi nendawo nemigwaqo elincane yama-alleyways. Ungathola izitebele zesikhumbuzo, izitishi ezidayisa izincwadi nemilingo, izitolo ezihamba ngamatilosi, izimakethe zezikebhe zendabuko, abathengisi befenisha banamuhla kanye nezindawo zakudala, izitolo ezincane zezincwadi nemidwebo emincane yobuciko.
Kunesikhungo esikhulu sezitolo esibizwa ngokuthi iFiumara esiseduze kwesiteshi sesitimela saseGenova Sampierdarena. I-mall ivulekile kusuka ku-9AM-9PM NgoMsombuluko - ngeSonto. Eduzane kunesikhungo semidlalo yaseshashalazini kanye nomsebenzi ohlanganisa nehholo lamachibi, i-Bowling alley kanye nezindawo zokudlela.
Iningi lezindawo lishaja insizakalo yenani elinqunyelwe umuntu ngamunye (elibizwa nge-coperto), njengoba kwenzeka ngokwejwayelekile Italy. I-trattoria, i-cafe noma i-bar ngeke ikuhlawulise le mali ngesidlo sasemini, futhi lokhu kuvame ukuba yindawo enhle yokuthola i-pasta noma i-sandwich ntambama. Izindawo zokudlela ezivulekile zisuka cishe kwi-12: 30 - 3: 00PM kwasemini ne-7: 30 - 10: 00PM
I-Pesto sauce idabuka edolobheni laseGenova. Kusetshenziswa ezitsheni eziningi, kufaka phakathi i-pastas ne-pizzas. Ungahlala u-oda kusuka ezinhlotsheni ezinkulu zepasta namaphaza atholakala lapha, kepha ukuzama leyo okusekelwe kwi-Pesto kumele uzwe ngokudla kwendabuko kwaseGenovese.
Okunye okufanele kuzame okuvela eGuovese noma eLigurian cuisine yi-focaccia, empeleni isinkwa samaNtaliyane esibhakwe ngotshani, esingabekwa u-anyanisi, amakhambi, noma okunye ukudla. Zinambitheka impela futhi zivame ukushibhile ukwedlula ama-pizza. Kunama-'Focaccerias 'amaningi asakazeke kulo lonke elaseGenova nasezindaweni ezizungezile. Lokhu ngokuyisisekelo ukususa izindawo, futhi kulula esikhwameni, futhi. Kuma-focaccerias amaningi, uzothola izinhlobo ezisetshenzisiwe ze-focaccias, kepha imvamisa, ezingcono kakhulu zokunambitha ziza kuphela notamatisi noma u-anyanisi kanye namafutha omnqumo. I- “focaccia” yasekuqaleni imane ihlanganiswa ngamafutha omnqumo nosawoti.
Ungaphuthelwa ukuzama i-farinata, uphaya omncane obuthuntu owenziwe ngofulawa wethanga, amanzi, usawoti kanye namafutha omnqumo.
I-Piazza delle Erbe: isikwele esincane edolobhaneni elidala, esinemigoqo emihle (imizuzu engu-5. Ukuhamba usuka kuPiazza De Ferrari noPalazzo Ducale) kuvulwa kuze kube yi1 AM. NgoLwesihlanu nangoMgqibelo imigoqo iyavulwa kuze kube yi-2 noma i-3 futhi kugcwele abantu abasha kuze kuse.
Ngokuvamile ulwazi lolimi lwesiNgisi luhle, futhi akunzima ukuthola umuntu ongakusiza ngezinkinga zokuvakasha kalula nangesiSpanishi noma isiFulentshi, kodwa okuhle kakhulu ukuthi ukhulume kancane isiNtaliyane futhi ngenxa ukuba khona kwamaphesenti abantu abadala.
Ngemuva kokuthi usuqedile nge-adventure yakho ukuhlola iGenova, kufanele ukwazi lokho IGenova yenza isisekelo esihle sokuhlola iCinque Terre, iRapallo, iPortofino, iPortovenere, iLa Spezia, noma iChiavari. Amadolobha anjengeTurin (1.5-2hrs), I-Pisa (I-1.5hrs), iMilan (i-1.5 hrs), i-Nice (3 hrs) konke kutholakala kalula ngesitimela.